बिचित्र संसार – Page3– shubhabihani
Home / बिचित्र संसार (page 3)	बिचित्र संसार	छोरी जन्मने आशामा १३ छोरा जन्माएका दम्पत्ती भन्छन्, ‘छोरी नजन्मेसम्म रोकिँदैनौं’
1,772 Views शीर्षक पढ्दा अचम्म लाग्यो होला । किनभने नेपाली समाजमा यसको ठिक विपरित हुन्छ । छोरा जन्माउने आशामा कुनै दम्पत्तीले ६/७ जना छोरीको जन्म दिएको घटना हाम्रा लागि साधारण हुन् । तर यो घटना हाम्रो लागि रोचक त छ नै नेपाली समाजमा यस्तो घटना विरलै सुन्न पाइन्छ ।
173 Views असोज ७ । जर्मनीमा घर, घरमा ग्याँस मात्र होइन बिएर पनि पुर्याउने गरिन्छ । जर्मनीको सिको गरेर अन्य केही देशमले पनि आफ्ना नागरिकलाई यस्तो सुझाब दिएका छन् । जर्मनीको बियर निकै लोकप्रिय मानिन्छ । वर्षमा एक पटक विसाल बियर फेष्टिबल हुने गर्दछ ।
जसमा भाग लिन संसार भरबाट मानिस त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् । त्यसकुरालाई ध्यानमा राखेर जर्मनीमा घर घरमा पाइपबाट बियर पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको हो । बियरको तलतल लागे बार वा रेष्टुरेष्ट धाउनु नै पर्देन । घरमै पाइपबाट बियर पानी जस्तै थापेर खान पाइन्छ ।
सुरुमा रुसी नागरिक आन्द्रेय एरेमिव नाम गरेका एक युवकको पसलबाट घरसम्म व्यक्तिगत पाइपलाइन बिछ्याएका थिए । यसबाट प्रेरित भएर जर्मनीमा पाइप राख्न मन गर्ने सबैका लागि पाइपलाइन बिछ्याइएको छ
फेसबुकमा फोटो शेयर गरेको भन्दै किशोरीले हालिन् आफ्नै आमा बाबुविरुद्ध मुद्दा
256 Views नियामा फेसबुक चलाउने अभिभावकहरुमध्ये सायद त्यस्ता अभिभावक नहोलान् जसले फेसबुकमा आफ्ना प्यारा सन्तानका तस्वीरहरु शेयर नगरुन् ।
तर आफ्नै सन्तानका तस्वीर फेसबुकमा शेयर गर्दा कतिपय अभागी अभिभावकलाई सन्तानबाटै मुद्दा खेप्नुपर्दोरहेछ । अस्ट्रियामा यस्तै भएको छ । आफ्नो बाल्यकालको फोटो फेसबुकमा शेयर गरेको भन्दै एक किशोरीले आफ्नो बाबुआमा विरुद्ध मुद्दा हालेकी छिन् ।
१८ वषर्ीय ती किशोरीले सन् २००९ मा खिचेको उनको फोटो उनका बाबुआमाले सोध्दै नसोधी फेसबुकमा पोस्ट गरेको भन्दै मुद्दा हालेकी हुन् । ती तस्वीरमध्ये कतिपय आफ्ना निकै निजी तथा गोप्य खालका तस्वीर पनि रहेको र त्यस्ता तस्वीर सार्वजनिक हुँदा आफुले साथीहरुबाट निकै असहज व्यवहारको सामना गर्नुपरेको उनको दाबी छ ।
ऋाफ्ना ती फोटोहरु फेसबुकबाट हटाउन आफुले कैयौँपटक बुवाआमालाई अनुरोध गर्दापनि नमानेको किशोरीको दाबी छ ।
पटक पटक आग्रह गर्दा पनि आफ्ना निजी तस्वीरहरु बुवाआमाले फेसबुकबाट नहटाइदिएपछि उनले बाध्य भएर मुद्दा हालेको किशोरीका वकिल माइकल रमीले बताएका छन् । किशोरीले आफ्ना बुवाआमा विरुद्धको मुद्दा जित्ने विश्वास उनको छ ।
कुमार युवकको पर्खाइमा छन् यहाँका नवयौवना युवतीहरु, कारण यस्तो छ
149 Views वैँशले उन्मुक्त भएका हरेक युवतीहरुको सपना हुन्छ की उनको विवाह धुमधामसँग होस् । तर दुनियामा एउटा यस्तो ठाउँ छ हाँ महिलाहरुका लागि बिहे गर्ने कुरा निकै कठीन कार्यको रुपमा रहेको छ ।
रुप र यौवनले मस्त हुँदाहुँदै पनि आफ्नो मनको राजा नभेट्टाएर पर्खिरहनुु उनीहरुको नियति बनिरहेको छ ।
ब्राजिलको नोइवा दो कोरडेएरो गाउँमा २० देखि ३५ वर्षसम्मका युवतीहरु आजपनि आफ्नो वरको खोजीमा जुटिरहेका छन् । हजारौँ युवतीहरु जवानी बिसाउनका लागि विवाहको पर्खाइमा छन् व्यग्रताका साथ ।
उक्त गाउँमा ठूलो संख्यामा सुन्दरताले भरिपूर्ण युवतीहरु छन् । तर विडम्बना उनीहरुलाई बिहे गर्ने अविवाहित युवकहरु भ्ने पर्याप्त संख्यामा छैनन् ।
यहाँका युवतीहरु प्रेम तथा विवाहको सपना त सजाउँछन् तर विवाह र प्रेमकै कारण गाउँ जन्मठाउँ छाडेर जाने कुरामा मन्जुर हुँदैनन् । बिहे गर्ने केटा घरज्वाइँ बन्न राजी नभएसम्म युवतीहरु बिहे गर्न तयार हुँदैनन् बरु थप पर्खिन तयार हुन्छन् ।
यो गाउँमा लैंगिक अनुपातको असन्तुलनका कारण युवतीहरु अविवाहित बस्नुपरेकाो हो । गाउँमा मातृसत्तात्मक व्यवस्था छ र महिलाहरुले बसालेको नियमानुसार पुरुषहरु चल्नुपर्छ ।
६० वटा रानी भएका राजा, जसले बर्मामा खाना खान्छन् भारतमा सुत्न आउँछन्
1,093 Views आधुनिक युगमा समेत ६० वटी श्रीमती भएका राजा ! अझ अनौठो कुरा त के भने हरेक दिन एक देशमा खाना खाने र अर्को देशमा सुत्न जाने ।
हो, आधुनिक युगका यी विचित्र राजा हरेक दिन म्यानमारमा खाना खान्छन् र सुत्नका लागि भारत आउँछन्, त्यो पनि कुनै जहाजमा नचढीकन ।
यो सत्य घटना हो भारतको नागाल्याण्डस्थित लोंगवा गाउँको । यहाँ कोन्याक जनजातिका मानिसहरु बस्दछन् । यो गाउँको आधा भाग भारतमा पर्दछ भने आधा भाग म्यान्मारमा । त्यसैले यहाँका मानिसहरु विना कुनै पासपोर्ट र भिसा भारत र बर्मा ओहोर दोहोर गर्दछन् ।
समाचार अनुसार यो आदिवासी समुदायका राजाको नाम अंग नगोवांग हो । यी राजाको अधिनमा लोंगवा समेत विभिन्न ७५ वटा गाउँ रहेका छन् । यी राजाको दरबारक्षेत्रको बीचमा भारत र म्यानमारको सिमाना पर्दछ ।
त्यसैले राजाको परिवारको भान्सा म्यान्मारमा पर्छ भने शयन कक्ष भारतमा । सोही कारण राजपरिवारले म्यान्मारमा खाना खान्छ र भारतमा गएर सुत्दछ । यी राजाको परिवार पनि निकै ठूलो छ । यिनका ६० वटा पत्नी छन् र उनका छोराहरु बर्माको सेनामा संलग्न छन् ।
यो गाउँका मानिसहरुले भारत र म्यानमार दुबै देशको नागरिकता लिएका छन् । यो आदिवासीलाई निकै खतरनाक आदिवासी मानिन्छ । यिनीहरु हृेड हन्टर्सको नामले पनि परिचित छन् ।
किनकी यिनीहरुले पहिले मानिसको सिकार गर्थे र मान्छेको टाउको साथमा लिएर जान्थे । तर सन् १९६० पछि उनीहरुले हेड हन्टिंग छाडिसकेका छन् । यद्यपि यो समुदायका मानिसहरुका घरमा सजिएका मानव खप्पर अहिलेपनि देख्न सकिन्छ ।
1,059 Views केटा वा केटीले एक अर्कालाई मन नपराएका कारण बिहेका प्रस्ताव अस्विकार हुने गरेको त सुनिएकै थियो । तर कहिलेकाहीँ मान्छे मन पर्दापर्दै पनि कुकुर मन नपरेका कारण समेत बिहे नहुन सक्दो रहेछ ।
भारतको बैंगलोरमा भएको छ यस्तै । त्यहाँकी एक युवतीले आफ्नो कुकुर मन नपराएको भन्दै एक युवकसँगको बिहेको प्रस्ताव अस्विकार गरेकी छिन् ।
करिश्मा वालिया नामकी ती युवतीले आफुले कुकुरकै कारण बिहे प्रस्ताव अस्विकार गरेकी भनिएका एक युवकसँग व्हाट्सएपमा भएको कुराकानी मंगलबार फेसबुकमा पोष्ट गरेकी छिन् ।
उक्त फेसबुक पोष्टमा केटाकेटीबीच भएको कुराकानी छ । कुराकानीमा केटाचाहीँले केटीलाई उनको कुकुर छाड्न मनाउने कोसिस गरिरहेको छ ।
करिश्माका अनुसार ती युवकसँग आफ्नो मागी बिहेको प्रस्ताव आएको थियो । अन्य कुराकानीमा केटा ठिकै थियो । राम्रो कमाउथ्यो र जिउडाल पनि आकर्षक नै थियो । तर जब करिश्माले बिहेपछि पनि आफुले आफ्नो कुकुर सँगै राख्न चाहेको बताइन् तब युवकले करिश्माको त्यस्तो इच्छालाई मन पारेन । उसले त्यो कुकुरलाई छाड्न भन्यो ।
व्हासएपमा भएको कुराकानीका क्रममा उक्त युवकले करिश्मालाई प्रष्ट भन्यो की उसले उनीहरुको प्रेमको बीचमा कुनै कुकुर आएको र कुकुरले ओछ्यान शेयर गरेको कुरा मन पराउँदैन । साथै आफ्नी आमालाई पनि कुकुर मन नपर्ने कुरा युवकले भन्यो ।
जिवनको कुनै उमेरमा कुकुर मन पर्ने तर त्यस्तो मन पराइ अस्थायी कुरा रहेको भन्दै उसले कुकुरको साथ छाड्न करिश्मालाई भन्यो ।
त्थापि करिश्माले कुकुरको साथ छाड्न मानिनन् । त्यसपछि उक्त युवकले मेसेजकै क्रममा झोक्किँदै लेख्यो त्यसोभए कुकुरसँगै बिहेे गर ।
युवकको त्यस्तो व्यवहार देखेपछि करिश्माले पनि आफ्नो प्यारो कुकुरलाई छाडेर त्यो हठी युवकसँग बिहे नगर्ने फैसला गरेकी छिन् ।
कवाडीमा किनेको कुर्सीले रातारात बनायो लखपति
2,442 Views हिन्दीमा एउटा उखान छः उपरवाला जब भी देता हे, छप्पड फाँडकर देता हे । जब मानिसको भाग्य बदलिनु छ भने त्यो रातारात बदलिन सक्दछ । यदि आफ्नो भाग्य पनि क्षणभरमै बदलियो भने तपाइँ कत्तिको खुसी हुनुहोला ? स्कटल्याण्डमा एक दम्पत्तिको भाग्य पनि क्षणभरमै बदलिएको छ ।
कुर्सी खरीद गर्ने त्यो दम्पत्तिलाई के थाहा थियो की त्यहीँ कुर्सीले उनीहरुको भाग्य बदल्नेवाला छ । उक्त दम्पत्तिले करीब १० वर्ष पहिले उक्त कुर्सी ५ पाउण्ड अर्थात् झण्डै सात सय रुपैयाँमा किनेका थिए, कवाडीमा । टुटेफुटेको कुर्सी मर्मतका लागि रकम नभएपछि उनीहरुले त्यसलाई स्टोर रुममा राखिदिए ।
कुर्सी किनेको ६ वर्षपछि जब उनीहरुले कुर्सीको मर्मत गर्न थाले तब उनीहरु अचम्मित भए । कुर्सी मर्मत गर्ने बेलामा यो पत्ता लाग्यो की कुर्सीमा हिराका गहना लुकाइएको रहेछ । ५० वर्षका एंंगस ब्राउनले ४७ वर्षकी पत्नी एन्जिलालाई कुर्सीमा बहुमुल्य गहना भेटिएको बताए र त्यहाँ भेटिएको हिराको औठी श्रीमतीलाई उपहार दिए । त्यस्तै हिराका रिंग लगायतका गहना पनि एन्जिलाले प्राप्त गरिन् । त्यो पूरानो कुर्सीमा बाहिर लगाइएको पत्रभित्रको भागमा झण्डै ५ हजार पाउण्ड बराबरका हिराका गहना भेटिए ।
उक्त कुर्सीलाई मर्मत गरेर चिटिक्क पारिएको छ भने गहना पाएर एन्जिला मख्ख छिन् ।
अमेरिकी ज्योतिषको भविष्यवाणीः अक्टोबर २ साँझ ६ बजे संसारको अन्त्य (भिडियाे सहित )
1,131 Views एजेन्सी । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्ने एक चर्चित सन्त ज्योतिष हेरोल्ड क्याम्पिङले यो वर्षको अक्टोबर २ तारिखमा संसारको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् ।अक्टोबर २ को साँझ ६ बजे संसारको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । उनको भनाइ अनुसार त्यतिबेला संसारको २ प्रतिशत जनसंख्या तत्काल स्वर्गवासी हुनेछ भने बाँकी अन्य कुनै स्थानमा पुग्नेछन् ।
पूर्व इन्जिनियर समेत रहेका ८९ वर्षीय क्याम्पिङले प्रत्येक दिन आफ्नो भविष्यवाणी रेडियो नेटवर्कको माध्यमबाट गर्ने गर्छन् ।यो रेडियो धार्मिक ब्रोडकास्टिङ संगठनले श्रोताको दान दातब्यको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने गर्छ । ७० वर्ष सम्म बाइबलको अध्यन गरेका सन्त हेरोल्ड क्याम्पिङले आफ्नो विशेष गणित विकाश गरेर भविष्यवाणी गर्दै आएका छन् ।
जिसस क्राइस्ट सुलीमा चढेको दिन देखि ७ लाख २२ हजार ५०० दिनपछि पृथ्वीको अन्त्य हुने तय रहेको दावी गर्दै उनले यो संख्या महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । बाइबलमा ५, १० र १७ लाई पवित्र तीन अंक मानिएको छ । यसको गुणनफलबाट आउने अंकलाई झनै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
सन्त हेरोल्ड क्याम्पिङले हैटी, जापान र नेपालमा आएको भूकम्पलाई समेत यो प्रलयको पूर्व संकेतकोरुपमा दावी गरेका छन् ।नेपाली हेडलाइनकाे सहयाेगमा हेर्नुस् भिडियोः tweet
नाटकीय प्रेममा विश्वास गर्दा अपहरण मा परे भारतीय नागरिक
379 Views भाद्र २७, २०७३-
भारतीय सीमा सहर जुगौलीका खुर्सिद अहमद भदौ १२ गते सुनौलीबाट पोखरा आउने क्रममा निकै उत्साहित थिए । कारण उनलाई भेट्न भैरहवाकी एक युवतीले पोखरा बोलाएकी थिइन् । फोन–फोनमै चिनजान भएकी ती महिलाको आग्रहमा खुर्सिद पोखरा आउन तयार भए । ती महिलालाई भेटे पश्चातका योजना मनमा सजाउदै भदौ ११ गते रात्रि बस चढेका खुर्सिद १२ गते पोखरा आइपुगे ।
उनलाई लिन ती युवती पृथ्वीचोक बसपार्कमा उपस्थित थिइन् । अहमदलाई आफ्नो घर लाने भन्दै उनले लेखनाथ नगरपालिका–८ स्थित अशोक अधिकारीको घरमा रहेको आफ्नो डेरामा पुर्‍याइन् । त्यहाँ पुगपछि मात्र खुर्सिद अहमदलाई आफू अपहरणमा परेको थाहा भयो । उनी त्यही घरमा भाडा लिइएको कोठामा बन्धक बनेर बसे । कोठामा बन्दी बनाइएका अहमदले त्यहाँ झ्यालबाट निस्केर भाग्ने योजना बनाए । झ्यालबाट बाहिर निस्कने क्रममा उनलाई देखेपछि घरधनी र अरूले चोरी गर्न लागेको आरोप लगाए । त्यसपछि अहमदलाई प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइयो ।
प्रहरीले सोधपुछ गरेपछि मात्र थाहा भयो उनी चोरी गर्ने मनासयले नभई अपहरणबाट मुक्त हुन झ्यालबाट भाग्न खोजिरहेका थिए । उता अपहरणकारीले भने उनका दाजुसँग एक करोड रुपैयाँको माग गर्दै फोन गरिसकेका थिए । अपहरणमा परेका अहमदलाई भदौ १३ गते साँझ कास्कीको लेखनाथ–८ शिशुवास्थित अशोक अधिकारीको घरबाट अपहरण मुक्त गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक गजुसिद्धी बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
डीएसपी बज्राचार्यका अनुसार अपहरणकारीले एक महिनाअघि यो योजना बनाएका थिए । सोहीअनुसार अहमदलाई उनीहरूले पोखरा घुम्न बोलाएर अपहरण गरेका हुन् । अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले भारतीय नागरिक सहाबुद्धिन कुरैसीलाई पक्राउ गरेको छ । उनको साथबाट प्रहरीले एक थान पेस्तोलसमेत बरामद गरेको छ । उक्त घटनामा संलग्न नवलपरासी कावासोती–११ बस्ने वर्ष २१ का अरुण घलेलाई रूपन्देहीबाट पक्राउ गरी कास्की ल्याइएको छ । अहपरणका मुख्य योजनाकारको खोजी भैरहेको डीएसपी बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा मुख्य योजनाकार पनि छिट्टै पक्राउ पर्ने बज्राचार्यको दाबी छ । घटनाका मुख्य योजनाकार पनि भारतीय नागरिक नैभएको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको उनले बताए । अहमदसँग नाटकीय प्रेम गर्ने ती महिलासमेत फरार छिन् । पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध अपहरण शरीर बन्धक मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता बज्राचार्यले बताए ।
चन्द्रमा मा समेत भूकम्प! सुन्दा अचम्म लाग्छ भूकम्पको कम्पन १० मिनेट लामो !
761 Views भदौ २५, काठमाडौं । चन्द्रमामा पनि धेरै भूकम्प जाने गरेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । चट्टानले बनेको साथै त्यहाँ भौगर्विक गतिविधि निकै कम हुने गरेपनि चन्द्रमामा धेरै भूकम्प जाने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । चन्द्रमामा जाने भूकम्पलाई मुनक्वेक भनेर चिनिन्छ भने त्यो ४ प्रकारका हुन्छन् । सूर्यको तापले हुने, उल्काहरुका कारण हुने भूकम्प र डिप क्वेक सामान्य हुने भएपनि स्वालो मुनक्वेक भने खतरनाक हुने गरेको छ । स्वालो मुनक्वेक ५ दशमलव ५ रेक्टर स्केलसम्मको हुने र यसको कम्पन १० मिनेटसम्म रहन सक्ने वैज्ञानिकले बताएका छन् । यस्तो प्रकारको भूकम्प जाँदा चन्द्रमामा घण्टीको जस्तो आवाजसमेत निस्कने नासाले जनाएको छ । चन्द्रमामा पृथ्वीमा जस्तो सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट नभएकाले के कारणले भूकम्प जान्छ भन्ने कुरा भने अध्ययनको विषय बनेको छ ।
चन्द्रमा सम्बन्धि बिशेष जानकारी १. चन्द्रमा चिहान बनिसकेको छ चिहान बनेको चन्द्रमा चन्द्रमालाई मानिसले अहिले पनि भगवान मानेर पूजा गर्छन् । तर चन्द्रमा चिहानको रुपमा पनि प्रयोग भएको छ । प्रख्यात भूगर्भविद् तथा खगोलविद् युजिन सुमेकरको अस्तु चन्द्रमामा विसर्जन गरिएको छ । उनले ब्रम्हाण्डको अध्ययनका लागि विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेका थिए, जुन अध्ययनको सहयोगमा एपोलो यान चढेर चन्द्रमा पुग्ने मानिसको सपना पूरा भएको थियो । आफ्नो जीवनकालमा चन्द्रमा पुग्ने सुमेकरको धोको भएपनि त्यो पूरा हुन पाएन । उनको इच्छालाई पूरा गर्न सन् १९९८ मा लुनार प्रोस्पेक्टरमा उनको अस्तु चन्द्रमामा पठाइएको थियो ।
२. घातक धूलोको भण्डार घातक धूलोको भण्डार चन्द्रमामा रहेको धुलोका कण अर्थात लुनार डस्ट निकै घातक रहेको छ । पृथ्वीमा बालुवा भएजस्तै चन्द्रमामा पनि लुनार डस्ट प्रशस्त छ । यो धुलो मैदाको पिठो जस्तै मिहीन रहेपनि निकै खस्रो रहेको चन्द्रमा पुगेका अन्तरिक्षयात्रीले बताएका छन् । यो धुलोकै कारण धेरै वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पनि असर परेको छ । चन्द्रमामा पुगेका अन्तरिक्षयात्रीलाई यसले मु हे फिभर समेत भएको थियो । साथै अनुसन्धान गर्न राखिएका विभिन्न उपकरणमा यस्ता धुलो पस्दा बिग्रने गरेको छ । यो धुलो गन्ध भने बारुदको जस्तै हुन्छ ।
३. चन्द्रमामा छायाँ पनि चुक घोप्टेजस्तो अँध्यारो चन्द्रमामा छायाँ पनि चुक घोप्टेजस्तो अँध्यारो चन्द्रमामा कुनै पनि वस्तुको छायाँ पृथ्वीमा भन्दा निकै गाढा हुने गरेको छ । जब नील आर्मस्ट्रङ र बज एल्ड्रिनले पहिलो पटक चन्द्रमामा पाइला टेके, उनीहरुको आफ्नै छायाँले अगाडिको बाटो अध्यारो बनाएको पाएका थिए । चन्द्रमामा वायुमण्डल नभएका कारण यस्तो भएको हो । आकाशमा सूर्य उदाएपनि छायाँ परेको ठाउँमा निस्पट्ट अन्धकार हुने हुँदा हिँड्न तथा उपकरणको मर्मत लगायत काम गर्न निकै अप्ठेरो परेको उनीहरुको अनुभव छ ।
४. डम्पिङ साइट बन्दै डम्पिङ साइट बन्दै चन्द्रमा चन्द्रमामा मानिस पुगेको झण्डै आधा दशक पुग्न लागेको छ । यसबीचमा चन्द्रमामा फोहोर थुप्रिने क्रम पनि बढेको छ । वैज्ञानिकका अनुसार अहिले चन्द्रमामा झण्डै १ लाख ८१ हजार ४ सय ३७ किलो फोहोर थुप्रिएको छ । अन्तरिक्षयात्रीले प्रयोग गरेका सामान लगायत विभिन्न परीक्षणका काम नलाग्ने सामान चन्द्रमामा थुप्रिएको हो